Taratra radiatera: ahoana ary oviana no hanaovana izany ary inona no | Fanavaozana maintso
Azo antoka fa ho avy ny fotoana izay tsy anafanan'ny radiatera radiatera tsara toy ny tamin'ny voalohany. Mety hitranga izany satria matetika ny rivotra dia miangona ao anatin'ny rafitra fanamainana rehetra ary manomboka manakana ny fivezivezin'ny rano izay tompon'andraikitra amin'ny fanafanana ny radiatera. Mba hamahana io olana io dia mila mianatra mandeha rà ny radiatera. Izany dia mba hisorohana ny radiator amin'ny famoahana hafanana amin'ny fomba heterogenika. Matetika dia atolotra alohan'ny vanim-potoana mangatsiaka tsirairay ny fandehanan'ny rà mandriaka mba hisorohana an'io olana io.
Noho io antony io dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny fomba fanadiovana ny radiatera ary inona ny maha-zava-dehibe izany.
1 Ny maha-zava-dehibe ny radiatera mandeha rà
2 Rahoviana sy ny fomba fandatsahan-dra
3 Valve mandeha ho azy sy fifandanjana hydraulic
Ny maha-zava-dehibe ny radiatera mandeha rà
Araka ny efa nolazainay teo am-piandohan'ny lahatsoratra, azo inoana fa manomboka manangona rivotra ireo radiatera ary manakana ny fivezivezin'ny rano manafana ny radiatera. Mahatonga azy tsy hamoaka hafanana mirindra izany, noho izany dia tsara ny manomboka radiatera mandeha rà. Ny fanaovana izany dia miorina indrindra amin'ny fanafoanana ny rivotra izay asan'ny boriborintany iray manontolo. Amin'izany fomba izany dia mahavita manatsara ny fahombiazan'ny angovo amin'ny fametrahana ny fanamafisana ary manatsara ny fanjifana herinaratra.
Ny fahombiazan'ny angovo dia mitombo amin'ny fametrahana hafanana ary ny fihenan'ny tabataba any ivelany. Fahita izany rehefa misy rivotra miangona avy amin'ny rafi-panafanana mba handrenesana feo hafahafa rehefa mamono ny fanafanana. Ireo feo ireo dia re matetika toy ny feo mikotrokotroka izay ateraky ny rivotra mibontsina manerana ny rafitry ny fanafanana. Izany no famantarana fa nanasongadina fa ilaina ny fandatsahan-dra ny radiatera alohan'ny hanombohan'ny vanim-potoana fanafana.
Rehefa manomboka mahamay ny radiator dia tsy mipoitra ny termostat fa ny quarry kosa mandeha foana. Mitranga izany satria tsy mahatratra ny maripana efa voarindra. Izany dia mahatonga ny boiler hiasa avo roa heny ary miteraka fihenan'ny angovo avo lenta kokoa nanomboka teo ny rafitra fanafanana dia tsy mandeha amin'ny laoniny. Amin'ireny tranga ireny dia zava-dehibe ny hahazoana antoka fa mandeha tsara ny fametrahana ny fanafanana antsika. Ny rafi-panafenana mahomby dia misoroka ny fandaniam-bola amin'ny famoahana angovo betsaka amin'ny fanjifana.
Rahoviana sy ny fomba fandatsahan-dra
Ny volana tsara indrindra hananganana ny radiator dia ny volana septambra sy oktobra, eo alohan'ny fanombohan'ny vanim-potoana mafana. Tena mety raha mila manafana azy isika nefa tsy miandry hilatsaka ny mari-pana, satria raha mbola tsy nodiovintsika izy io dia hiasa "amin'ny antsasaky ny lasantsy", ka mandany hery sy vola amin'izay. Andao hojerentsika hoe inona ireo dingana hianaranao amin'ny fandatsahan-dra ny radiatera. Dingana iray somary tsotra izy io ary mila manaraka ireto torohevitra ireto fotsiny ianao:
Hamarino raha mila mandeha rà mandriaka ianao: Mba hanaovana izany dia mila manodina ny fanafanana ianao ary mamindra ny tananao ambony. Raha mangatsiaka kokoa noho ity ambany ity dia midika izany fa misy rivotra tsy maintsy miakatra ary manakana ny fizaran-tany.
Tsy maintsy manomboka amin'ny radiator akaiky ny boiler ianao. Ny fiasa rehetra dia manomboka amin'ity radiator ity akaikin'ny boiler satria tsy maintsy arahana ny fikorianan'ny rano voajanahary.
Mametraha fitoeran-javatra eo ambanin'ny stopcock: tsara kokoa ny misafidy rano vera ka apetraka ao ambanin'ny paompy. Izany no ahafahantsika misoroka ny tany tsy ho lena rehefa manomboka mivoaka ny rano.
Nodinina tamin'ny fanily ny lakile: Ny vola madinika dia azo ampiasaina hanokafana ny paompy valva. Tamin'ny voalohany ny rivotra izay mivoaka raha vao nosokafantsika ny paompy dia maimbo. Avy eto dia hitantsika ihany koa ny sasany amin'ireo rano avy amin'ny jet mbola tsy hanao fanamiana.
Tsy maintsy nakatona ny paompy rehefa mihetsika ny jet: Rehefa mivoaka tanteraka ny tsiranoka misy rano sy homogène dia tsy maintsy manidy ny fantsona isika satria hidika izany fa efa nivoaka ny rivotra, ka mila manidy ny paompy amin'ny lafiny mifanohitra fotsiny isika.
Ny fandidiana dia tsy maintsy averina ho an'ny radiatera rehetra: Aza adino fa zava-dehibe ny fanarahana radiator amin'ny radiator ny rano mikoriana voajanahary. Raha sendra misy ny radiatera, dia tsy ilaina ny manatanteraka ny fandidiana.
Farany, mety ny manamarina ny faneren'ny boiler. Tsy maintsy mitaky sanda 1-1.5 ny bar satria aorian'ny fanadiovana ny haavon'ny tsindry dia milatsaka. Zava-dehibe ny haavon'ny tsindry amin'ireo ambaratonga ireo.
Raha tsy te-hanatanteraka irery ireo asa rehetra ireo ianao, dia afaka miantso olona matihanina miasa ary afaka mikarakara ny fanadiovana ny rafitra radiator iray manontolo ary mamela azy ho vonona amin'ny vanin-taona mafana.
Valve mandeha ho azy sy fifandanjana hydraulic
Ny rafi-pampafana maoderina dia mety manana valizy mandeha ho azy miaraka amin'ny rafitra fanalefahana mandeha ho azy. Io karazana valizy io dia mamoaka ny rivotra mandeha ho azy, noho izany dia tsy ilaina ny mandatsa-dra azy io amin'ny tanana. Raha toa ka miaraka amin'ireo karazana valves ireo dia voamarikao fa tsy mafana tsara ny radiatera, noho ny antony azo antoka, dia tsara kokoa ny manatona matihanina hijerena ny rafitra.
Rehefa tsy mafana 100% ny radiatera dia midika izany fa tsy afaka miasa tsara ny rafitra fanamainana. izay miteraka fako angovo tsy ilaina. Ny rafi-panafenana mahomby dia afaka misoroka ny fandaniam-bola ary mamonjy angovo. Ankoatry ny fanadiovana ireo radiatera, misy fepetra hafa azo raisina hahazoana ny fahombiazana tsara indrindra avy amin'ireo radiatera ireo.
Rehefa miresaka momba ny fametrahana ny fanafanana afovoany isika dia misy programa iray izay azo tanterahina mora foana hahazoana antoka fa ny radiatera rehetra dia mahazo ny rano ilaina amin'ny asany, io no antsoina hoe fifandanjana hydraulic. Ity dia dingana iray izay tsy maintsy tanterahin'ireo mpiorina teknika mahay, raha tsy izany dia mety hisy olana maro samihafa mandritra ny fizotry ny fametrahana.
Misy tombony maro amin'ny fifandanjana hydraulic:
Amin'ny lafiny iray, mamela rano mikoriana ampy hahatratra ireo taratra radiatera rehetra izy io.
Mahazoa valves thermostatic hifehy ny mari-pana
Farany, ny fifandanjana hydraulic dia afaka misoroka tabataba manelingelina mandritra ny fametrahana.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fomba sy ny fotoana handefasana radiator-dra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Taratra radiatera
Heterotrophs: inona izy ireo sy ny mampiavaka azy